Chii chandinotarisira kubva kuApple muna 2017 | IPhone nhau
Isu tinotanga gore uye kuApple zvinoreva tariro nyowani, tarisiro nyowani ... uye nekuodzwa mwoyo kutsva. Kambani yakakoshesa pasi rose inogara ichifunga kutarisira kukuru pamberi pechinhu chitsva, uye muzviitiko zvakawanda izvi zvinoreva kumwe kuora mwoyo kusati kwazadzikiswa kwezvido zveumwe neumwe. Gore richangopera iri rave gore rakazara nemimvuri nemamwe magetsi anonakidza, asi mushure menguva pasina kushamisika kukuru, 2017 inosvika, gore rinotara gore regumi rekuziviswa kwechinhu chakakosha tekinoroji munhoroondo yazvino: iyo iPhone. Uye izvi zvinoreva kuti Apple inofanirwa kurangarira zvakakodzera. Chii chatingatarisira kubva kukambani yeapuro yeiyi 2017? Ndinokutaurira zvirevo zvangu.
1 Imwe iPhone 8 uye maviri ma7
2 Itsva iPad Pro uye ine isingadhuri iPad
4 Inguva yemakomputa uye macOS
5 Apple Tarisa uye watchOS 4
6 Apple TV uye tvOS
Imwe iPhone 8 uye maviri ma7
Icho uye chichava Apple's mureza chigadzirwa pasina kupokana. Iyo iPhone ndiyo smartphone par kugona, uye chinhu icho Apple inotongwa gore rimwe nerimwe. Unogona kushamisika neAirPods, ine Mac kana nechinhu chitsva, asi kana iyo iPhone ikasasangana nezvinotarisirwa, gore iri repakati. Uye muna 2017 kambani inofanirwa kutora zvimwe zvese nekuti ine makore gumi. Uye zvinoita sekunge Apple ine yakajeka, uye yakagadzirira zano nyowani nematatu mafoni, maviri anoramba achienderera uye imwe ichave iri nyeredzi. Muna 2017 isu tinogona kuve nemairi maApple 7s, yakajairwa 4,7-inch modhi uye iyo 5,5-inch Uyezve, iine diki yekushongedza shanduko kana ichienzaniswa neyazvino, zviri pachena zvemukati kugadzirisa uye pamwe kuchaja isina waya chinongedzo cheUSB-C hachirasike kana. Asi zvinoita senge zvine chokwadi ndechekuti shanduko huru yaizove iyo iPhone 8.
Zvinotaridza kunge zvine chokwadi chekuti iyo iPhone 8 skrini ichachinja kubva kune yechinyakare LCD yakashandiswa kusvika parizvino kuenda ku AMOLED. Pave nemakore akati wandei kuteerera uye kuverenga runyerekupe nezve shanduko iyi, uye zvinoita sekunge Apple yakagadzirira kukwakuka, uye yaizoshandisawo zvivakwa zvezvikwiriso izvi kuti utore iPhone isina kana mafuremu epadivi, ichishandisa, pamwe, a yakakomberedzwa skrini yeGreen Edge maitiro (kana kwete). Apple ingadai yakatora nhanho yekutanga kubvisa bhatani repamba neiyo yazvino iPhone 7, uye muiyo iPhone 8 izvi zvinogona kuve zvakabatanidzwa muchiratidziro, kunge iyo Touch ID sensor kuti tione zvigunwe zvedu. Yakakura sei iyi iPhone 8 nyowani? Pano runyerekupe rwakasiyana harubvumirane, asi zvinoita sekunge ma 5,8 inches ndiwo anoteererwa zvakanyanya, kuwana mudziyo mudiki kunyangwe pane ikozvino iPhone 7 Plus.
Zvimwe zvinotsanangurwa zveiyi iPhone 8 zvaizosanganisira iri nani kumberi uye kumashure kamera, maspika stereo, uye dhizaini dhizaini uchishandisa, sezvazvaive zvakaita neiyo iPhone 4, girazi sechinhu chakakurumbira. Apple inogona kunyange shandisa nzira imwecheteyo sekukwiza iyo iPhone 7 Jet Nhema kuona kuti maforamu ealuminium haana kusiyana negirazi rekumberi neshure. Kutengesa zvisina waya uye USB-C zvimwe zvinhu zvinosanganiswa mumabheti mazhinji, asi kuziva Apple kunogona kuchinja kusvika panguva yekupedzisira.
Itsva iPad Pro uye ine isingadhuri iPad
Iyo iPad renji chinhu chakavanzika panguva ino. Iine maPad maviri ePro ehukuru hwakasiyana, iyo iPad Air 2 semhando yakachipa yekupinda, uye iyo minis yePadis inopona nepese pavanogona, izvozvi iyo iPad renji ine pachena kusanzwisisika kwakadai sePad Air Air 2 inodhura zvakafanana neiyo iPad Mini 4, kugovana maratidziro asi neyakajeka screen musiyano usingaenderane nemutengo wakaenzana. Apple inofanirwa kupa iPads kutenderera, uye Kurume inogona kunge iri nguva.
Iyo 12,9-inch iPad Pro revamp inoita kunge yakachengeteka pane zvese runyerekupe. Iine rinopfuura gore kuseri kwaro, Apple "yepamusoro peiyo renji" yave kutoda kutsiva nyowani, uye zvinoita sekunge yaizouya chete muchimiro chekuchinja kwemukati, kusimudzira kuchiratidziro kuti zvienderane neiyo yazvino iPad Pro ye9,7 inches, mamwe simba uye RAM, uye zvimwe zvishoma. Iko kusahadzika kuri mune 9,7-inch modhi. Iko kune kutaura kweiyo nyowani nyowani 10,9-inch iPad Pro, ine dhizaini iyo inogona kudzikisa iwo bezels uye kubvumira iyo hombe screen saizi pasina kuwedzera saizi yechigadzirwa., uye nezvimwe zvakafanana zvakafanana kune mukoma mukuru.
Uye zvakadii nezveiyo 9,7-inch modhi ipapo? Inenge yakaenzana saizi asi isina zita rekuti "Pro", uye ndiyo ichave yekupinda modhi yePadad Uye iyo mini mini? Zvinotaridza kuti hapasisina nzvimbo yeiyo 7,9-inch iPad mukati meApple yemahwendefa, uye iyo piritsi diki inogona kupedzisira yabviswa. Zvinotaridzika kunge zvakaoma kuti, kutanga munaKurume, Apple inosarudza kuvapa nechaji isina waya uye USB-C zvinongedzo, sezvo vachiisa izvi zvitsva vaizomirira kusvika munaGunyana nekuratidzwa kweiyo iPhone. Hapana shanduko kuchiratidziro inotarisirwa futi, uye iyo AMOLED ingadai yatosvika mumamodeli e2018.
Kana tataura nezve iPhone ne iPad, chinotevera chinonzwisisika kuita kungave kutaura nezve iOS 11. Panguva ino, hapana mhando yekudonha yakaonekwa nezve inotevera vhezheni yeApple nhare mbozha inoshanda sisitimu. Izvo iwe zvaunogona kuwana online zvimwe zvishuwo kana mazano emunyori pane chaiwo runyerekupe nezve iOS 11, saka ndizvo zvandichataura kukuudza: zvido zvangu zveIOS 11.
iOS 10 yaizove shanduko sisitimu, vhezheni yaizosanganisira mashoma maficha asi izvo zvaizosimbisa izvo zvakatounzwa mushanduro dzapfuura. Shanduko hadzina kuve shoma, asi kana zvinhu zvikashanda sekufanira kwavo, pamwe nguva yasvika yekutora njodzi uye kutanga kutara nzira yemakore mashoma anotevera. Uye pano kune akati wandei mapoinzi uko Apple inofanira kuisa yakasimbiswa: Siri uye iyo iPad vhezheni. Mubatsiri weApple anofanirwa kupedzisa kudzidza, uye asvike iwo makona kwaasati asvika. Izvo zvinodikanwa kuti ese maapplication anogona kushandisa Siri, zvakatonyanya saka ikozvino kuti neAirPods Siri ndiyo chete nzira yedu yekudyidzana nesystem. Siri anofanira kumira kuve anecdote mukati meiyo sisitimu kuti ave zvechokwadi mubatsiri, izvo vashandisi vanomanikidzwa kushandisa nekuti zvinoita kuti zvinhu zvive nyore kwatiri.
Iyo imwe poindi iyo Apple yanga ichimisa makore akati wandei iri mune vhezheni yeIOS yePad, kunyanya sezvo iyo Pro Pro iripo. Apple anonyanya kuita piritsi hwakawanda patinotarisa Hardware nesimba, asi zvinokundikana patinotaura nezve software. Iyo iPad inofanirwa kumira kuve hama hombe yeiyo iPhone kuve chayo chishandiso nemabasa ayo uye neayo maitiro. Uye ini handisi kutaura nezve kupatsanura skrini kana PiP, ndiri kutaura nezve hunyanzvi uye hwekudyidzana mabasa sekukwanisa kudhonza zvemukati kubva pahwindo kuenda kune rimwe, kana kugona kumhanyisa mashandisirwo ehunyanzvi, kwete shanduro dzemafoni nhare. Kusvikira izvi zvasvika paPad Pro, zita rekupedzisira iro rinotakura harizove rakakodzera.
Uye apa ndipo panosvika chimwe chezviroto zvekushuvira zvikuru: kunyorera kwese Zviripachena kuti havasi vashandisi kana zvishandiso izvo zvisati zvagadzirirwa nzira imwechete yekushanda, kunyangwe hazvo Microsoft ichiedza zvakadii kutikurudzira neimwe nzira, asi nhanho yekutanga inofanira kutorwa pamwe nemaapplication. Zvemuchadenga maapplication anoshanda paIOS uye macOS, zviri pachena aine akasiyana interface kune yega yega kifaa, asi neakafanana mashandiro. Zvichida pakutanga zvakangogadzirirwa macOS uye iyo Pro Pro, inogona kunge iri imwe yemhando yepamusoro iyo Apple piritsi inoda kupedzisa kubvisa.
Inguva yemakomputa uye macOS
Wese munhu anobvuma kuti iyo Appel Mac renji iri mukuda kwakanyanya kwekugadzira-pamusoro. Kunze kweMacBook uye iyo nyowani MacBook Pro, mamwe ese akasara akagadziriswa zvidiki zvakanyanya. Uye kana tikatarisa apo Mac Pro yakapedzisira kuvandudzwa, misodzi inouya kumeso edu (2013). Kunyangwe Gurman achisimbirira kuti kuvandudzwa kwegore rino kuchave kudiki, pasina zvishoma kupfuura kuunzwa kweUSB-C kubatana mukati meMac renjiPane tariro yekuti 2017 ichatisiira zvimwe zvinoshamisa nenzira yeMac nyowani, nyowani Mac mini kana nyowani Mac Pro.
Chinhu chinoita senge chakamanikidzwa ndechekuti Apple inotangisa chishongedzo icho chinokutendera iwe kushandisa iyo TouchBar nemakomputa ako edesktop. Iyo MacBook Pro yakanaka kushanda nayo, asi kusvika kumba kune yako huru komputa uye kusakwanisa kushandisa zvishandiso zvakafanana sepafoni yako chinhu chisina kunaka icho Apple chinofanira kugadzirisa nacho nyowani Smart Khibhodi iyo inosanganisira iyi yekubata bar. Izvo zvinoitika neiyo Touch ID sensor, ikozvino iyo Apple Pay iri kupararira uye ngatirege kukanganwa kuti inogona kushandiswa kubhadhara kumawebhusaiti anoenderana neApple yekubhadhara system.
Nezve iyo inoshanda sisitimu, ichaenderera mberi neyakaitika kusvika zvino, ichisanganisa mabasa matsva kubva kuIOS, mubhedha wayo wakakwana wekuyedza. Kunatsiridzwa kweSiri, iyo yakaunzwa munaGunyana apfuura kekutanga mu macOS, pamwe iko KumbaKit application izvo zvinotibvumidza isu kudzora imba yedu yakabatana kubva kumakomputa ... Tichaona ese macOS nhau munaJune, mukati meWWDC 2017, pamwe neiya eIOS 11.
Apple Tarisa uye watchOS 4
Zvizvarwa zvitsva zveApple Watch zvichangosvika pamashefu ezvitoro, uye isu hatitarisiri shanduko kanosvika pakupera kwa2017. Runyerekupe runoti iyo itsva Apple Watch 2017 ichave yakafanana chaizvo neyazvino, nebhatiri riri nani se shanduko huru. Haisi nhau dzakaipa, nekuti ichi ndicho chimwe chezvinhu zvakashoropodzwa zvisina kusimba mapoinzi eApple Watch, uye ingangoita chero smartwatch chaiyo. Asi isu tichafanirwa kuve takamirira kuti tione kana mamwe maficha senge FaceTime kamera inosanganisirwa, kana kunanga kubatanidza kuburikidza ne4G pasina kuve nehukama neiyo iPhone.
watchOS 3 yaive shanduko inoshamisa kune mashandiro eApple Watch, nemaapps akazovhura pawaida iwo. Asi watchOS 4 inofanirwa kuenderera mberi nekuvandudza mashandiro ayo achiri kure nedanho reIOS, kunyanya nekuda kwekushomeka kwepakutanga kwakadaro zvekuti vanenge vasinganzwisisike. Sei iwe uchigona iwe kungoenderana chete imwe Apple Music playlist? Chii ichi icho iro data rehutano nePanyama Chiitiko chisina kuwiriraniswa neICloud? Ko zvakadii nechitoro chekutarisa? Iyo nyowani vhezheni yavanotiratidza muna Chikumi inofanirwa kugadzirisa matambudziko aya uye nekupa mabasa matsva anotendera iyo Apple Watch kuti ibatanidzwe seyayo mudziyo, pane kuita sechishongedzo cheiyo iPhone.
Apple TV uye tvOS
Isu tinosiya kumagumo rimwe remabhomba makuru asina kumbopedza kuputika. Ndiri kureva Apple Apple TV, chishandiso icho chatave takamirira kwemakore, uye payakasvika haina kukonzera manzwiro ainofanira kuita. Usakanganise, ndinofara neangu Apple TV 4 uye ndinoishandisa mazuva ese, kutaura zvazviri, handigoni kubata terevhizheni isina Apple TV. Ini handizive chero munhu akaitenga uyo asingashandise zvakanyanya uye zvakanyanya, asi chinenge chiri chishongedzo chakapfuura chisina kurwadziwa kana mbiri.. Munyika umo kutenderera kuri kuwedzera kukosha, uko materevhizheni ari kuwedzera kuve protagonists emisha, uye uko mitambo yemavhidhiyo iri chikamu chakakosha cheinenge zororo remunhu wese, hazvisi zvakajairika kuti Apple TV haina kukonzera manzwiro, uye izvo tsananguro imwe chete: chimwe chinhu chiripo.
Uye yakawanda yemhosva iri pamashandisirwo, uye saka Apple. Zvichida nekuda kwekukanganisa kwehurongwa, pamwe nekuti vanogadzira havana kukurudzirwa zvakakwana kuti vagadzire Apple TV ... isu tichafanirwa kutsvaga iyo chikonzero nekuigadzirisa. Uye ndeyekuti ikozvino Apple TV 4 chishandiso chikuru, asi kana ndikaverenga mashandisiro andinoshandisa zuva nezuva, neminwe yeruoko rumwe ndine zvakawandaZvichida iyi Apple TV, inova iyo mbiri router uye isina waya mutauri, ndiyo mhinduro kudambudziko iri, naSiri akanyatsobatanidzwa uye akagadzirirwa kutora pakati penzvimbo yekutandarira. Tsigiro yezvinyorwa zve4K, uye izwi rizere uye kubata kwechiratidzo kuburikidza neakavakirwa-mukati makamera uye mamaikorofoni zvinogona kunge zvichisvetuka ichi chishandiso chinofanirwa kugadzira kuitira kuti munhu wese ade kuve chake.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Zvandinotarisira kubva kuApple muna 2017
Izvo AppleTV inoshaya ndiyo yakawanda yemitambo iyo ini nemwanakomana wangu tinonakidzwa nayo ipad, zviripo zvinoseka, ini, uye mwana anondibvunza, isu hatinzwisise chero chinhu!